Sagittarius & Capricornlove hukama, hushamwari, muchato - Zodiac
app chitoro chisiri kushanda iphone 6
spotify isingabatanidzi kune wifi
iphone isina internet isina wifi
sei ndichida icloud yekuchengetedza
imwe nzira yekudzima iphone
Sagittarius naCapricorn: kuenderana kwezviratidzo muhukama hwerudo, mune hushamwari uye muwanano
Nyeredzi dziri kure, dzinotonhora uye dzisinganzwisisike dzinogona kuve vatungamiriri vechokwadi vevanhu uye kunyange kusarudza magumo ake. Dzakatsanangurwa nyeredzi dzinovabatsira vanhu kuita bhizinesi zvinobudirira uye kunyange kuwana rudo rwavo. Chii chiri kuenderana kweSagittarius naCapricorn, chii chatingatarisira kubva kune yakadaro tandem?
Mumiriri ane hupenyu hwechinhu cheMoto Sagittarius ane hunhu hwakanaka. Vanhu ava vane tarisiro, vanokatyamadza, vanokasira, vane tarisiro uye vanoshamwaridzana. Ivo havawanzo kuwanikwa nemoto: zvakanyanya zvinokwezva maitiro avo ezviitiko uye ruzivo rwezvinhu zvese zvitsva nezvisingazivikanwe. Sagittarius inowanzo kuve yakapoteredzwa neshamwari, vatinoshanda navo uye vanoyemura zvavo, nekuti hunhu hwakajeka hweichi chiratidzo chinokwezva vanhu vakasiyana.
Capricorn, kune rumwe rutivi, yakakomba, yakakwana, yakati iti kusava netariro. Hupenyu hwavo hwese huri pasi pemitemo yakaoma uye zvinogona kunzi ivo vanoenda pamwe nekuyerera uye vanosarudza kugadzikana kune hupenyu hwezuva nezuva hwehupenyu. Izvi zviratidzo zvemhepo zvinokoshesa kuvimbika kwevanhu, kuvimbika uye kukomba kwezvinangwa.
Murume Sagittarius uye Mukadzi Capricorn: kuenderana
Ko murume weSagittarius nemukadzi weCapricorn, pakutanga vachiona zvakasiyana uye vakasiyana, vachakwanisa kuvaka Union yakatendeka uye yakasimba, nerudo kana nemutsa? Kana ivo tandem yavo yakatemerwa kusava nehanya uye kutonhora kwehukama?
Mukudanana, Capricorn naSagittarius havawanzo kuwirirana: mutsauko mumaonero nezve hupenyu, hunhu, zvibodzwa uye zvishuwo zvinoita kuti zvinzwike.
Sagittarius haasati akagadzirira kuzvimanikidza kupinda muchimiro icho Capricorn iri kuyedza kutsanangurira iye. Iyo yekupedzisira, kune rumwe rutivi, inoona Streltsov seyakanyanya kusagadzikana, yecheche uye isina maturo. Panguva imwecheteyo panenge pasina zvipingamupinyi pakunzwa kwechokwadi uku, uye nekudaro, apo vamiriri vaviri vezvinhu izvi zvakasiyana pavanosarudza kuve pamwechete, zvese zviri mumaoko avo.
Kuvaka hukama hwakabatana uye hwakasimba, zvisinei, ivo vanofanirwa kushanda zvakanyanya pavari, kutsvaga mhinduro kumatambudziko, kubvumirana uye kubvumirana. Zvinogoneka kuti kuedza kwakadai kuchapihwa mubayiro wakanaka uye kuve mubatanidzwa usingaputsike wemoyo miviri ine rudo.
Vazivi venyeredzi vazhinji vanogutsikana kuti muchato pakati paSagittarius naCapricorn hausi kudenga. Iye murume anotyisa ari kutsvaga drive, adrenaline uye adventures. Musikana anobva kuCapricorn achazongofanira kutsungirira kusagadzikana kwemurume wake uye achiri hupenyu, hunotaridzika sekugara mugwenga regomo. Nekudaro, kushushikana kwakadai kumukadzi ane chiratidzo chemhepo kunogona kuve kusingatsungiririki.
Nekuda kweizvozvo, vese vaviri vanogona kugumisa kuti yavo pfungwa yezvinangwa zvehupenyu uye mufaro muwanano zvakasiyana zvakanyanya. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kusawirirana kunotanga, nekuti vanhu ava vakarukwa kubva mukukonana. Kana muchato usingatsigirane nerudo rwevose uye chishuwo chekukanganisa,
Sagittarius naCapricorn mune hushamwari havasiwo vanoenderana. Kutaurirana uye nyore kusangana neSagittarius uye vanhu vasinganzwisisike, Capricorn nekunetseka kuzivisa kune vausingazive, zvakatomesa kutanga hukama hwehukama. Hazvigoneki kuti mumwe wavo anozvipira uye achichinja maonero avo pahupenyu, pamwe nemaonero avo epasirese, nekuda kweumwe murangariro. Ndosaka zvirinani kuti vaviri ava vagare vari shamwari: mubatanidzwa wakadai haungatarisirwe kuve husingaperi, hushamwari husinga peri uye kudyidzana.
Inoenderana sei Sagittarius neCapricorn
Mamiriro ezvinhu achashanduka sei kana mukadzi weSagittarius nemurume weCapricorn vasangana? Zvichida vakadzi vane moto, vakapihwa yavo isina kusimba pabonde, vanozogona kuita kuti tandem iyi ibudirire?
Hwaro hwehukama hunofadza pakati pemurume weCapricorn nemukadzi weSagittarius ichave yakasimba uye yechokwadi kunzwa. Vabatsiri vanofanira kubhadhara zvakanyanya kukamurwa kwemabasa uye nguva yemahara. Semuenzaniso: moto Sagittarius anosangana neshamwari neChishanu, nepo mukomana weCapricorn asina godo uye asingadzime mashiripiti, asi anoenda kushamwari kana kunakidzwa nekuona zvinyorwa.
Vanodiwa vanopedza iyo yakasara yenguva vari pamwe chete. Mumwe murume weCapricorn anofanira kuyeuka: Sagittarius haashiviriri kuyedza kwekuzvitonga nesimba. Vakadzi vakadaro vanonzwa rusununguko rwemukati uye havagone kusungirwa maoko nemakumbo. Pane nzira mbiri dzekubuda mumamiriro ezvinhu aya: vaviri vacho vanopararira nenzira dzakasiyana uye vanotsvaga mumwe munhu akakodzera,
Kufanirana muwanano pakati pemukadzi anopisa uye nemurume wemhepo handiyo yepamusoro. Zvakanakisa pane zvese, kana mumwe nemumwe wavo aine yavo yekutengesa, yekuzvivaraidza kana chinhu chaunofarira, usaedze kunyungudika murudo rweumwe wako. Hapana chinogona kuitwa nezvazvo, mutinhimira wehupenyu hwevaviri ava wakasiyana kwazvo. Sagittarius inoda kufamba, kugona, chiitiko chekuzviratidza. Mukadzi uyu haana kumbogadzirira kuzvipira kushambidza kusingaperi uye kumira kuseri kwechoto. Wako-Capricorn, pane zvinopesana, anotarisira yakayerwa nguva yekuzorora uye inonaka ine moyo masikati.
Nehurombo, ichi chiratidzo chepasi hachidi kugovana mukadzi wake chishuwo chekumhanya mamaira kuti aone kunyura kwezuva. Chirevo chake: basa, kuenderera uye kugadzikana. Vakaroorana vakadaro vanowanzova nemakakatanwa pazvinhu zvepamba uye zvekushandisa. Asi kudanana kunokwanisa kukunda zvese. Uye mukadzi weSagittarius uyo anoda kusevha roorano anofanira kukomberedza murume wake nekuchengeta nyoro uye rudo. Anozonyanya kutarisisa kune mutsa, kuvimbika kweakasarudzwa uye achamubata asina kugadzikana, mafungiro asingafungidzike nekushivirira.
Mune hushamwari, Capricorn naSagittarius, kana wekutanga ari murume, uye wechipiri ari mukadzi, vanoshivirirana, nekuti mukadzi weSagittarius, kunyangwe hazvo aikurumidza uye asina chokwadi, achiri akapfava kupfuura murume ane chiratidzo chemoto. Achakwanisa kutsetseka makona akapinza zvishoma kana paine chikonzero chekutaurirana naCapricorn. Zvakangodaro, zvinoramba zviri chokwadi chekuti vakadzi vechinhu chemoto vanotsungirira zvakakwana asi maCapricorn mashoma anofinha - ivo vakafinhwa nezvavo.
Ndokusaka zvisati zvichidikanwa kuti utaure nezvehukama hwakasimba hwehukama mumubatanidzwa uyu. Zvakanakisisa kwavari kuti vachengetedze hukama hunonakidza kana kutaurirana sevashandi pamwe navo nebasa rimwe chete ravanoita. Kunze kwezvo, chiitiko chehunyanzvi chevaviri ava chakanyanya kusarudzika pane kudanana. Yakasanganiswa neyakajairika bhizinesi zano, Sagittarius naCapricorn vanowirirana zvakakwana uye vanove rakanakisa rinoshanda timu.
Akanaka uye akaipa mativi emubatanidzwa
Pakutanga kuona zvinoita kunge pasina mativi akanaka kuCapricorn-Sagittarius tandem. Zvisinei, izvi hazvisi zvechokwadi zvachose. Kugara pamwe chete kunopa vadyidzani mukana wekuwana zviitiko zvakakosha zvehupenyu. Vanogona kudzidzisana kudyidzana, kugona kubvumirana uye kugona kugamuchira vamwe sezvavari.
Uye kana mumwe nemumwe wavo akabudirira kudarika zvichemo zvinowirirana, achidzidza kuvimba mumwe uye nekunzwisisa zvido zvavo, hwaro hwakasimba hwehukama hwakabatana hunogona kutorwa sechivimbiso. Izvo zvinongosara kuita kuyedza kusimbisa kubatana kwekufara.
Kune rimwe divi, pane chakajeka chakaipa mubatanidzwa wakadai. Imwe yadzo kugara kunetsana mamiriro ezvinhu uye kunyangwe rudzi rwekuvengana. Vabatsiri chete vanofanirwa kugara vachitsvaga mapoinzi ekubatana, akatsemurwa pakati pezvavanoda uye nezvido zvemudiwa. Iyo inokurumidza-ine bhandi Sagittarius inowanzo kuudza vanhu chokwadi chokwadi chibereko mumaziso avo. Inonzwisisika Capricorn inoshivirira chimiro chakadai, uye kusagutsikana pamwe nekutsamwirana kazhinji mune vaviri.
Kuenderana horoscope yemubatanidzwa, nemumwe mudiwa ari Sagittarius uye mumwe Capricorn, kwete kukurudzira zvisina basa. Vanhu vakasiyana kwazvo vamiriri vemoto nepasi zvinhu. Panguva imwecheteyo, manzwiro echokwadi uye chishuwo chekuchengetedza hukama zvinogona kugadzira zvishamiso chaizvo, kunyangwe mumamiriro ezvinhu anoita seasina tariro pachawo.
Kana maCapricorn achishanda pane kwavo kutonhora kwemweya, uye Sagittarius inova inoshivirira kunyatsoita uye kunyange kumwe kufinhwa kwemudiwa, hukama uhu hunogona kuve hunovimbisa uye hwakasimba.
African Astrology - Horoscope & Zviratidzo zveZodiac
Chinese Zodiac Imbwa Kuenderana - Ndiani Anokodzera Imbwa?…
Sagittarius nePisces: kuenderana kwezviratidzo…
Mukadzi weSagittarius Anoita Sei Kana Ari Murudo?
Zviratidzo gumi Munhu wePisces Ari Mukuda Newe
Aries mukadzi: hunhu, kuenderana ne…